Dadkii ku dhaawacmay dagaaladii Gaalkacyo oo loo soo qaadayo Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Dadkii ku dhaawacmay dagaalkii Gaalkacyo ayaa maanta lagu wadaa in loo soo qaado magaalada Muqdisho, kadib amar ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha oo ahaa in labada dhinac dadkii ka dhaawacmay la geeyo Isbitaalada Muqdisho.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in diyaarad laga dalbay magaalada Muqdisho, si dhaawacyada yaalla labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo looga.
“Saakay diyaarad ayaa ka dalabnay magaalada Muqdisho, waxaa rajeynayaa in dadkii ku dhaawacmay dagaaladii Gaalkacyo lagu qaado, oo xamar la geeyo, halkaas waxaa ku sugan Wasiirka Caafimaadka iyo howl wadeenada kale”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Isbitaalada ku yaall Gaalkacyo ayaa waxaa uu la ciir ciirayaa dhaawacyadii ugu badnaa abid, waxaana qaar ka mid ah dhaawacyada la sheegay inay culus yihiin, kuwaasoo aan waxba looga qaban karin xarumaha caafimaadka Gaalkacyo.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in illaa afartan kun oo qoys ka barakacday colaadii Gaalkacyo, isla markaana in ka badan sodon ruux ku dhinteen dagaaladii dhowaan ka dhacay oo u dhaxeeyay maamulada Galmudug iyo Puntland.